ဂျပန်​ ဗဟိုဘဏ်​ အစည်းအ​ဝေးပွဲ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တိုင်း စတာလင်ပေါင်သိသိသာသာ လှုပ်ရှားလေ့ရှိပါသည်. ထိုဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂ရက်နေ့ ၁၄:၀၀ အချိန်တွင်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်.
မူဝါဒရေးဆွဲသူများအနေဖြင့် တင်းကျပ်သည့် ငွေကြေးမူဝါဒများအား ဆယ်နှစ်တာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ကျင့်သုံးချမှတ်နိုင်သည်ဟု ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းထားကြပါသည်. ခန့်မှန်းချက်များအရ ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းကို ၀. ၅%အထိ မြှင့်တင်လာနိုင်ခြေရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြပြီး ထိုကဲ့သို့ အတိုးနှုန်းတင်လိုက်ပါက ဈေးကွက်ကကြိုတွက်ပြီးသည့်အတိုင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ရာ ဈေးကွက်အတွက်ထိုကိစ္စသည် အထူးတဆန်းကိစ္စမဖြစ်လာနိုင်တာ အသေအချုာပင်ဖြစ်ပါသည်. စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမည့်အချက်မှာ ငွေဖောင်းပွနှုန်းအပေါ် ဗဟိုဘဏ်၏ မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး ထိုကိစ္စကို အထူးတလည်ပြောသွားပါက GBPတန်ဖိုးတက်နိုင်ပြီး ထိုကိစ္စအား သာမာန်သဘောပြောသွားခဲ့ပါက GBPတန်ဖိုးကျဆင်းလာနိုင်ပါသည်.